Olalaha Doorashada wadanka Kenya oo si rasmi ah u bilowday - Warsan Media
Warsan MediaCodka Soomaalida FinlandHOME
Olalaha Doorashada wadanka Kenya oo si rasmi ah u bilowday January 30, 2013 Leave a Comment Waxaa maanta si rasmi ah u bilowday ololaha doorashada dalka Kenya oo lagu wado inay dhacdo 4ta Maarso, waxaana isu soo bixii ugu horeeyey ku qabtay maanta magaalada Nairobi xisbiga uu hogaamiyo Raysalwasaaraha dalka Kenya Raila Odinga.
By: Khalid Yusuf
Bidix: Kalonzo Musyoka & Midig: Raila Odinga oo ku sugan xarunta Guddiga doorashada [29 Jan 2013]
Raila Odinga ayaa shalay si rasmi ah guddiga doorashada ee Kenya [the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC)] u gudbiyey musharaxnimadiisa, isagoo lasiiyey shahaadadiisa cadeynaysa inuu u tartamayo xilka Madaxweynaha.
Xisbiga The Coalition for Reforms and Democracy (Cord) iyo taageerayaashiisa oo kumanaan gaaraya ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha Uhurru ee bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Isu soo baxan ayaa ahaa bilowga ololaha doorashada ee uu bilaabay Raysalwasaaraha Kenya oo u tartamaya xilka Madaxweynaha.Banaanbaxa ay maanta isugu soo baxeen xisbiga Cord ayaa waxaa Raila Odinga kala qeyb qaatay Madaxweyne kuxigeenka Kalonzo Musyoka oo asagu xisbigiisa kula jira.
Odinga ayaa sheegay in muhiimada ugu weyn ee xisbigooda xooga saari doono uu yahay Shaqo abuuris si shacabka Kenya u helaan dhaqaalo ku filin, wuxuuna balan qaaday inuu wax badan ka qaban doono dhanka Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Bidix: Uhuru Kenyata & Midig: William Ruto
Xisbiga Cord ee Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa la filayaa inuu loolanka ugu weyn uu dhexmaro Xisbiga ay ku midoobeen labada Siyaasi Uhuru Kenyata oo ah Raysalwasaare Kuxigeenka Dowlada Kenya iyo William Ruto oo horey usoo ahaan jiray wasiirkii Beeraha, labadan siyaasi ayaa taageerayaal badan kuleh dalka Kenya. Uhuru Kenyata ayaa taageero xoogleh ka heysta beesha Kikuuyada oo awood xoogleh ku leh dalka Kenya.
Uhuru Kenyatta oo kasoo baxay xarunta Guddiga doorashada [29 Jan 2013]
Mwai Kibaki Madaxweynaha Kenya oo isagu kasoo jeeda qowmiyada Kikuuyada ayaa sanadkan xilka ka degaya, waxaana loolan xoogleh ugu jira inuu xilkaasi qabto Uhuru Kenyatta oo ay isku qowmiyad kasoo jeedaan isla markaana uu dhalay Madaxweynihii ugu horeeyey ee Kenya Jomo Kenyatta.
Kalonzo Musyoka oo maanta ka hadlayey banaanbaxa lagu taageerayey Raila Odinga oo isagu kasoo jeeda qabaa’ilka Lou, ayaa sheegay in xiligan shacabka Kenya ay tahay inay ka gudbaan qabiilka, isagoo sheegay in shacabka wax ku doortaan barnaamij iyo hogaan wanaag. Musyoka ayaa sheegay in ay doonayaan inay badbaadiyaan dalka Kenya, wuxuuna xusay inay taageero ka heystaan dhamaan gobalada iyo qowmiyadaha ku dhaqan wadanka Kenya.
Dhinaca kale waxaa cabsi xoogleh laga qabaa in marka la gaaro doorashada Maarso ay markale dalka Kenya ka dhacaan rabshado lamid ah kuwii ka dhashay natiijadii doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadkii 2007 oo ay naftooda ku waayeen dad ka badan 1500 qof, kuna baro kaceen dad ka badan 200 kun oo Kenyaan ah.
You must be logged in to post a comment.	Warar kale
Ciyaarihii kubada cagta oo isku badalay siyaasad xog uu soo ururiyay Wariyaha Faaqidaada Cayaaraha Tv Universal Tv Cabdinaasir SooloWariyaha Faaqidaada Cayaaraha Mudane Cabdinaasir Soola oo toosh ku ifiyay sportiga Soomaalida iyo xaga uu uscdo oo … [Read More...]Anoo Suxurta Cunayo hadii la Adimo masii wadan karaa Sh ShiblWaxyaalaha Soonka Jabiya Shuruudooda Iyo Waxa Aan jabin Sh. Maxamed UmalCayaarihii wadanka Finland oo la soo gabagabeeyay daawo Barnaamijkaas oo dhamaystiranAfar dhalinyara ah oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Deegaanka Toholammilla ee dalka FinlandXarakada Talabaan oo maanta gubay gawaadhi shidaal iyo xarun kayd oo ku taalay agagaarka Caasimada AfganistaanLINKS
Return to top of pageCopyright © 2014 Radio Warsan